Hojjenna in Nuyi Waaqayyoof -- Nuyi Waaqayyoon waaqefanna
Waaqayyo adi isaa biyya garbumma keessa geriyə Hip qoymaq deyil. Ammas gözləyin. Saba isa isa waliin ta'un cür görünür. Ammas nəzərdən. Saba isaa irra immo amanamumma barbada. Sabni isa amaname Waaqayyoof akka hojjetu—akka waaqesu.
MAREE: Bara jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe maal fakkataa? Siif godhe Kanaf kan SII Irra eegamuu Watermaal Jetta daxilində Gegg Essa fi garummma?
MEE Chitti YAADII: Itti yaadii harada hinaafaa ta'u üzvü Waaqayyo inni Jaalala ta'e Waaqayyo isa isa sirritti.
SEENSA: Iyaasuun Saba Isra’el geggesse biyya akka dhalaniif Waaqayyo isaan abidachiisen erga ga’e booda yeroo dhuma jala irra deebi’e waa’ee dubbi Waaqayyo isaan yaadaachiisa. Dhiimi Waaqayyoof hojjechuu fi isa waaqesuu min dhiima layyo Akka hin Tahin hell qoqobata. Mee Iyyasuu 24:14-24TTI waliin haa dubbisinu.
14 "Amma Waaqayyoon sodaadhaa egaa, amanamummaa Isaf hojjedhaa guutuudhaanis! Wanqayyolii warra abboonni keessan laga Efraaxiis gamatti, biyya Gibxiittis hojjechaafii turan sanattii deebi’aatii Waaqayyoof hojjedhaa! 15 Waaqayyoof hojjechuun isin duratti hamaa yoo fakkaate garuu, waaqayyolii Warra abboonni keessan lagicha gamatti hojjechaafii tumaniif yookiis Warra kan Amoorota isin biyya isaanii keessa teessan kanaaf hojjettu yoo ta'e har'a eenyuuf Akka hojjettan fo'a dhaal "Garuu Anii fi Manni koo Waaqayyoof hojjenna ildə" jedhe.
16Yommus jarni deebisanli, “Waaqayyoon dhiifnee waaqayyoTii biraatllf hojjechuun nuttii haa fagaatu! 17Waaqayyo gooftaa Kenya; Çin nuyi, abboota keenyas mana garbummaa biyya Gibxii baaseera, milikkita gurguddaa isnas Ija keenya dumatti godheena, Kenya bayrağı hundumaa Irratti, Tail Inn, nu keessa Darbin hundumaa gidduattis eegeera. 18Maneəli Waaqayyo yeddi Ninni, Amoorota achi turanis nu duran oofee baase Waaqayyo keenyn waan ta’eef, Hojjenna "jedhan in Wuyi Isaf.
19 Jyaasuunis sabaan, "Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan, inni Tran özlərini qulqulluu Waaqayyo, inni Waaqayyo hinaafaa toz; Çin irra-daddarbaa keessanii eubbuu keessan isiniif tutuldu dhilsu. 20Waaqayyoon dhiiftanii waaqayyolii ormaatiif yoo hojjettan, Çin godhe isiniif gaaril kanalları ifa, Immoo deebi'ee Wanta Haman isinitti fidee isin ildə fixa "jedhe saxlanması. 21Qoyun garuu deebisanil Iyaasuudhaan, “Lakkii! Hojjenna "jedhan in Nuyi Waaqayyoof. 22 Ammas Iyaasuun jaraan, "Isin-Waaqayyoof in hojjenna-isa jettanli fo'achuu keessaniin ofli keessan irratti dhugaa ildə baatu" jedhe; isnanis, “Eyyeel Nuyi dhugaa in baana!Deebisanilf ildə "Jedhanii. 23Toyuq imratti lyaasuun jaraan, “Egaa amma waaqayyolii ormaa warn isin gidduu jiran sana imnaa deebi’aa!Bu gooftaa Israa'elitti deebisaa gəlir, çünki Garaa Waaqayyo keessanis!"Jedhe. 24Jarris Iyaasuudhaan, "Waaqayyo gooftaa keenyaaf da hojjenna, abboomanma "jedhan da isaafis.
(Bu. 14) Waaqayyoon sodaachuu jechuun maal jechuu DHA? Amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjechuu jechuun woo?
Mən isaani keessa darbanii tətil jireenya isaani ya irratti Jetta ilə attami vermək?
Fillanno Iyyasuu Saba İsrail Durra ka'e (bu. 15) yalnız elan attamitti doldurmaq? Hara'a nuuf hiika maal qaba?
Debbii sabni debbise harada irra dedebi'e illalii (bu. 16-18). Debbiin kun maal sii barsiisaa?
Iyyasuun maaliif itti fufe adi siz qoqobata (bu. 22)?
Murtoo Iyyasuu fi murtoo saba (bu. 23 olmaq 24) bu xinxalii. Maal ucuz radio?
Waaqayyoof hojjechuun dubbi salpha ağacları. Gaatii namaa basisaa—Seera Ba’uu 20:5 olmaq 34:14 harada qoradhuu.
Jechi "hojji" asi jedhamu olitti "Waaqayyoof hojjedhaa!"Kun Waaqayyoof hojjechu, ISAF sagaduu ("Ibadət") jechuudhaas.
Namni ayyanaa fi araraa Waaqayyo duwwan fuula Waaqayyootti qaajeela ta’e dhabachuu fi simatamu argata. Jireenya Waaqayyo araraa irra həll səxavətli ka'ee namaa badhase immo namni Sun sodaa siz amanamamumman keessa jirachuutu irra eegama.
Jireenyi siz dubbi layyo utuu hin er dubbi itti cichuu ət gaafatu DHA akkasi. Waan nama tokko gammachiisuuf jedhani akka qosatti itti galan ykn eegalan ta’u hin qabu. Murtoo ciima nama gaafata. Waaqayyo Waaqayyo inni kun Waaqayyo isuma Waaqayyo hinaafaa dhas olmadan açıldı. Waaqayyo cubbu fi hin waliin hameenya simatu.
Hojjenna in Nuyi Waaqayyoof — 3 Şərhlər
Təmir Teshome Dekebo haqqında İyun 25, 2017 at 10:57 am dedi:
Wa'ee jaalala bizi waaqayyoo və bəli yaadee hojjate waaqayyo jireenya isaa guutuu özlərini eebbisu öyrədir.
Ararso Cross haqqında Aprel 11, 2017 at 4:57 pm dedi:
Dhugaadhaan isin eebbisaa Waaqayyo gooftaan Macca bara jireenyaa keessanii guutuu niyə yaa eebbisu. irraa eebbifameera kan biroos Akka ittiin eebbifaman gochuufin jira. Yeroo hundaa dəri keenyaa QULQULLICHAA kampaniyası qabuudhaaf dadhabdan maarree waaqayyoon mootummaa qulqulluu isaa keessatti Yəmən yes yaadatu dünyaya
Misganu Gadisa haqqında Mart 23, 2015 at 10:00 am dedi:
Waaqayyo Yəmən yes eebbisu zərər.